CL – Guruub C: Man City oo guushii abid ugu horreysay ka gaartay Barcelona, iyadoo kooxaha Celtic iyo Borussia Moenchengladbach ay isku garab dheceen… + SAWIRRO – Gool FM
CL – Guruub C: Man City oo guushii abid ugu horreysay ka gaartay Barcelona, iyadoo kooxaha Celtic iyo Borussia Moenchengladbach ay isku garab dheceen… + SAWIRRO
(Yurub) 02 Nof 2016 – Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa guusheedii ugu horreysay abid ugu dambayn ka gaartay naadiga reer Spain ee Barcelona oo marti ugu ahayd garoonka Etihad kulan ka tirsan guruubka C ee Koobka horyaallada Yurub, iyadoo labo jeer uu shabaqa soo taabtay Ilkay Gundogan, dhinaca kalena isla guruubkan waxaa kulan dhexmaray kooxaha Borussia Moenchengladbach iyo Celtic ay ku kala tageen barbaro.
Haddii aynu ku bilowno kulanka Man City iyo Barcelona, kooxda Barca ayaa goolka la horreysay waxaana weerar dabo-mareyn ah oo ay soo qaaday kooxda reer Spain kubbad uu la soo cararay Neymar oo uu caawinteeda lahaa, waxaa shabaqa gaarsiiyey 21’daqiiqo Lionel Messi, kaasoo ciyaarta ka dhigay 1-0 ay ku gacan sarreeyeen wiilasha Barcelona.
Lionel Messi ayaana sidaas ku dhaliyey goolkiisii 16-aad 14-kii kualan ee ugu dambeeyey oo uu tartankan Champions League ku wajaho kooxaha Ingiriiska.
Inta aan la aadin qeybta nasashada Man City ayaa iska soo guday goolka lagu hoggaaminayey waxaana weerar dabo-mareyn ah oo ay markooda soo qaadeen u dhaliyey 39’daqiiqo İlkay Gündoğan, kaddib baas wacan oo uu ka helay Raheem Sterling, kulanka ayaana lagu kala nastay barbaro 1-1.
Ilkay Gundogan ayaa sidaas ugu lug leh afar gool labadiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu u ciyaaray kooxda Manchester City, kani waa geesi u soo dhashay kooxda tababare Guardiola.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay kooxda Man City ayaa hoggaanka ciyaarta la wareegtay waxaana Barcelona bulusoon qurux badan oo toos ah ugu shubay 51’daqiiqo Kevin de Bruyne, kulanka ayaana sidaas ku noqday 2-1 looga gacan sarreeyey Barca.
Waa markii afaraad oo ay Man City ka dhaliso Champions League bulusoon toos ah, waxaana De Bruyne ka hor ugu dhaliyey Kolarov oo labo jeer ah iyo Yaya Toure.
Manchester City ayaa sii dheereysatay hoggaanka ciyaarta waxaana goolkooda saddexaad u dhaliyey 74’daqiiqo Ilkay Gundogan kaddib caawin uu ka helay Aguero, kaasoo ahaa goolkiisii labaad ee kulankan, inkastoo ay goolkan xiddigaha Barcelona ku andacoodeen in kubadda ay ku dhacday gacanta Aguero, laakiin kulanka ayaa ku soo idlaatay 3-1 ay ku adkaadeen wiilasha Pep Guardiola ee Man City.
Dhinaca kale kooxaha Borussia Moenchengladbach iyo Celtic ayaa kulan ka tirsan isla guruubka C wada ciyaaray waxaana ay isku mari waayeen barbaro 1-1.
Guruubka C ee Champions League sidan ayaa loo kala sarreeyaa:-
SAWIRRO: Borussia Moenchengladbach 1-1 Celtic
CL - Guruub D: Kooxaha Atletico Madrid iyo Bayern Munich oo u soo baxay wareegga 16-ka koobka horyaallada Yurub kaddib guulo ay gaareen… + SAWIRRO